काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठ्ठीमा पार्न खोजियो | Makalukhabar.com
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेसमाथि अंकुश लगाउन लागेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीसहित नेपाल पत्रकार महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रेको छ ।
सरकारकै भ्रष्टाचार र विकृतिको विषयमा मिडियामा समाचार आउन थालेपछि सरकारले कडा कानुन बनाउन लागेको धेरैको टिप्पणी छ । मिडिया नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकबारे नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण के छ ?
प्रेस काउन्सिलका मुख्य दुइवटा काम हुन्छन् । एउटा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने, अर्काे अचारसंहिता पालना भए/नभएको हेर्ने । नेपाली पत्रकारितालाई विश्वसनीय, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुन्छ । यो पटक हामीबाट वर्गीकरणको काम झिकियो । ठीकै छ, हामी वर्गीकरण गर्दैनौँ । सरकारी विज्ञापनको सुविधा र दर्ता खारेज अर्काेले गर्ला । प्रेस काउन्सिलले विगतमा गर्दै आएको आचारसंहिता नियमन, अनुगमनलाई अझ व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने, प्रेसपास वितरण गर्ने, प्रेस इजलास बनाउने हाम्रो कन्सेप्ट थियो । तर, यहाँ सरकार हामीले बनाएको ड्राफ्टलाई आफु अनुकूल बनाएर काउन्सिललाई आफ्नै अधीनमा राख्ने काम गर्यो ।
पत्रकारले अनैतिक काम गरे, गडबढ गरे छापाखाना ऐन छ, गाली बेइज्जती ऐन छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ऐन छ । तर, अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा पत्रकारलाई जेल सजायसहित १० लाखसम्मको जरिवानासमेत उल्लेख गरियो । १५ हजार रुपैयाँ पनि तलब पाएको हँुदैन । उसलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने भयो भने के होला ? कसले तिर्ने ?
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापीका र न्यायपालिकालाई निगरानी गर्ने भएकाले पत्रकारितालाई चौथौ अंग भनिएको हो नि । यो पनि राज्यको अंग हो । त्यो अंगलाई त्रासमा राखेर हुँदैन । आर्थिक जरिवाना, जेल सजाय, फौजदारी अभियोग लगाउने होइन् बरु, पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि परीक्षा पास गरेर मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरौँ न । परीक्षा लिऔँ, आचारसंहिताको कोर्स बनाआँँै, लाइसेन्स वितरण गरौँ । उसले आचारसंहिताको कसम पनि खाएको हुन्छ । अनि त्यसको बाबजुत अटेर ग¥र्या भने पो सजाय गर्ने हो त । यहाँ त एकै चोटि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कुरा भयो । पत्रकारिता गर्नेलाई पनि कडाइ गरिनुपर्छ । मापदण्ड बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि प्रेस पास हामी नै वितरण गर्छौं, प्रेस इजलास हामी नै बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेको विधेयकमा यी विरोधी विषय समेटिएकोले विरोध गरेका हौँ ।
अहिले अभ्यासमा रहेको कानुन पुरानो हो, समयअनुसार रूपान्तरण जरुरी छैन र ?
प्रेस काउन्सिल ऐन समयअनुसार शुद्धीकरण हुनु जरुरी छ । प्रेस काउन्सिल संसारभर नै अर्धन्यायिक निकायको रूपमा छ । ०४८ सालमा बनेको ऐनले सबैलाई समेट्न सक्दैन । ०५० सालपछि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन न्युज मिडिया कति आइसकेका छन् । यिनलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । तर, कानुन परिमार्जन गर्ने नाउँमा अहिलेको विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल हुलाक विभाग जस्तै बन्न सक्छ । कानुनको कोर्रा लगाएर फौजदारी अभियोग लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।
पत्रकारले बुझेको कुरा लेख्ने र देखेको कुरा प्रसारण गर्ने हुन् भन्ने आधारभूत कुरा पनि बुझिएको छैन । प्रेस काउन्सिल ऐन, ०४८ को प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भनिएको छ, त्यसलाई यो विधेयकमा हटाइएको छ । विधेयकले स्वायत्तता खाइदियो । काउन्सिलले सुरुआतमा तयार पारेको मस्यौदाको ९० प्रतिशत भाग हटाइएको छ । मिडियाले पनि टाउको फुटाएर, रगत बगाएर नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याएको हो नि ।
यसले नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारलाई समस्या सिर्जना गर्छ । सरकार र पत्रकारबीच द्वन्द्व बढ्छ ।
भनेपछि अहिले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक पूर्णरूपमा प्रेस विरोधी छ । यसले राम्रो गर्दैन ?
विधेयकको सबै कुरामा विरोध गरेको हैन । जस्तो समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आयो । क्लिन फिडका कुरा राम्रा छन् । स्वागत गरेका छौँ । तर, पत्रकार र मिडिया काउन्सिललाई अंकुश लगाउने विधेयकप्रति मात्र हाम्रो असहमति हो ।
यसले नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारलाई समस्या सिर्जना गर्छ । सरकार र पत्रकारबीच द्वन्द्व बढ्छ । संक्रमणकाल पार गरेर देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बेलामा मिडिया र कार्यपालिकाबीच भिडन्त हुँदा राम्रो हुँदैन ।
तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका विषयमा पनि जानकार हुनुहुन्छ, अनुशासन, नियमन लगायतका विषयमा विदेशमा कस्ता अभ्यास छन् ?
विश्वमा प्रेस स्वनियमन हुँदै गएको छ । काउन्सिलकै आवश्यकता नरहेको अवस्था छ । मलेसियाको उदाहरण हेर्नुहोस् । त्यहाँको कानुन अली कठोर थियो । पत्रकार गैरपत्रकार जसले पनि मुलुकको छवि धमिल्याउने काम गर्छ भने त्यसलाई १० वर्ष कैद हाल्ने प्रावधान थियो । तर, अहिले त्यसलाई समेत सुधारेर ६ वर्ष बनाइएको छ । अब मलेसियालाई प्रजातान्त्रिक देश भन्ने कि, गैरप्रजातान्त्रिक देश भन्ने ?
त्यसैबाट सिको गर्दै भारतमा प्रेस पास सस्पेन्डको प्रावधान ल्याउने भनियो । त्यसको यति विरोध भयो कि, त्यो निर्णय मोदी सरकारले सच्चाउनु प¥र्या । प्रेसप्रति कठोर देश पनि छन् भन्दैमा तिनैको सिको गर्न मिल्दैन ।
हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, यहाँ थप नियन्त्रण गर्न खोजियो । हामीले अहिलेको काउन्सिललाई अग्रगामी, थप स्वतन्त्र र समावेशी बनाउन माग गर्दै आएका छौँ । काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठ्ठीमा पार्न खोजियो ।
मिडिया विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले कस्ता सुझाव दिएको थियो ? त्यसमा के–के विषय समेटियो ?
काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सभामुखको संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौँ । मन्त्रालयको सचिव राखियो । अझ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रीले तोकेको व्यक्तिले छनोट गर्ने अधिकार दिइयो । मन्त्रीले चाहेका बेला अध्यक्ष बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले काउन्सिल सधैँ त्रासमा रहने अवस्था रहनेछ । काउन्सिलका अध्यक्षलगत्तै मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि राखिएको छ । पत्रकार महासंघको अध्यक्षलाई तल राखिएको छ । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पहरेदारी गर्ने र नीति निर्माणको मर्म समेटेको छैन । हामीले दिएका सुझाब एउटै नसमेटिनुले पत्रकारितालाई बन्देज लगाउने खेल पहिल्यै सुरु भएको रहेछ भन्ने अहिले बुझिएको छ ।
नैतिकता र पेसागत मर्यादासँग गाँसिएको विषयमा दण्ड दिनु अनुचित हो ।
पत्रकारलाई दण्डको व्यवस्था गरियो र, मर्यादित प्रेसका लागि काउन्सिललाई सरकार मातहतमा लैजाने अवधारणामा चिन्ता हो ?
अहिलेको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भनेर के भाङ धतुरो खाएर लेखिएको हो ? काउन्सिलले पत्रकारितामा आउनुअघि एक सातासम्म आचारसंहिता पढाउने र परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले विधेयकबाट हटाइएको छ । पत्रकारलाई सबभन्दा ठूलो कारबाही परिचयपत्र खारेज गर्नु हो । जरिवानाको नाममा पत्रकार र प्रेस जगत्लाई तर्साउन खोजिएको छ । १० लाख जरिवाना तिरेर पत्रिका चलाउन सकिन्न । तिरिएन भने यो विधेयकले जेल पठाउँछ । अब के पत्रकारलाई जेल पठाउने ? पत्रकारलाई काउन्सिलले माया पनि गर्छ, कारबाही पनि । तर, यहाँ जिम्मेवार मर्यादित प्रेसका लागि काउन्सिल भन्ने अवधारणा नै उडाइयो । प्रेस काउन्सिलभित्र छुट्टै इजलास राख्न गरिएको प्रस्तावसमेत अस्वीकार भयो ।
नेपालमा सैनिक इजलास छ । श्रम र प्रशासनिक पनि अदालत छन् । राजस्व न्यायाधीकरण छ । हामीले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काउन्सिलमा इजलास राख्ने प्रस्ताव गर्यौं। तर, त्यसको ठीकविपरीत प्रेसको हुर्मत लिएर अदालतमा उभ्याउने अवस्था बनाइँदै छ । नयाँ विधेयकले हालका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नैतिकता र पेसागत मर्यादासँग गाँसिएको विषयमा दण्ड दिनु अनुचित हो ।
प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कानुन बनाउनुमा कतै हामी पत्रकारको भूमिका पनि जोडिएको छैन । हाम्रो पत्रकारिता पनि कहाँ शुद्ध छ र ?
यो कुरा हामीले महसुस गरेका हौँ । पत्रकारभन्दा लाजमर्ने कुरा हाम्रै कारणले भयो कि ? चाहिनेभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेका हौँ कि ?
कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको फोटो जोडेर पनि विकृति मच्चाएका छन् । तर, कोही गरिबका छोराछोरी खान नपाएर चोरी गर्न थाले भने उनीहरूलाई दण्ड गर्दै जेलमा पठाउनेकी सुधार केन्द्रमा पठाउने ? हामीले भनेको पत्रकारले गल्ती गरेमा उसलाई चिन्तन गर्ने मौकामा दिनका लागि उसको प्रेस पास निलम्बन गर्ने नै हो । तर, अहिले त प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउने कानुन आउँदै छ ।
प्रेस काउन्सिलको भूमिका पनि कमजोर भयो नि ?
सरकारले नै काउन्सिलको भूमिका अस्पष्ट पारिदिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ तर, योग्यता तोकिएको छैन । सरकारमा जो मन्त्री आए पनि उनले योग्य भन्दा पनि आफ्नो नजिकको मान्छे टिप्दै नियुक्ति गर्न थाले । अयोग्य बसेको ठाउँमा गरिएको निर्णय अयोग्य हुनसक्छ । प्रेस काउन्सिलमा राजनीति अत्यधिक भएको छ । अब यसलाई सिस्टममा ढाल्नैपर्छ । त्यो म पनि स्वीकार्छु ।
नेपाली पत्रकारितालाई नियमन गर्न र व्यवस्थित गर्न काउन्सिलले के गरिरहेको छ ?
ऐनको ब्यवस्थाअनुसार हामीसँग अधिकार नै छैन । हामीलाई सरकारले दिएको पत्रको आधारमा काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय अनलाइनहरू सूचीकरण गरिरहेका छौँ । धेरै विकृति थिए । झोलामा ल्यापटप बोकेर हिँड्यो, त्यहीँबाट समाचार हालेको हुन्छ । कार्यालय छैन, ठेगाना छैन, सम्पादकको नाम छैन, फोन नम्बर छैन । यो त सेनाले हवाईफायर गरेर हिँडेको जस्तो भयो । डोमेन विदेशतिर छ, समाचारबाट आहत हुनेहरू यता छन् ।
पछिल्ला केही घटनाले हामीलाई कानुन र अभिभावक पनि चाहिने रहेछ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । अदालतले पत्रकारको स्रोत खोल्नुपर्छ भन्यो । त्यहाँ हामीले विरोध जनायौँ । प्रहरी प्रमुखदेखि अदालतसम्मलाई बोलायौँ । र, यो हाम्रो क्षेत्राधिकार हो हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भन्यौँ । त्यतिबेलासम्म पाँच सय अनलाइन दर्ता थिए, त्यो घटनापछि धेरैलाई अब अभिभावक चाहिने रहेछ है भन्ने भयो र दर्ता हुन आए ।
अब मिडिया काउन्सिलको विवादलाई कसरी समाधान गर्ने त ?
विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएको छ, पास भएको छैन । त्यसमा छलफल गर्ने संशोधन गर्ने भन्नेमा धेरै बाटाहरू छन् । अब सरकारले हामी सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजमा सुशासन कायम हुनेगरी, पत्रकारिता पेसा पनि मर्यादित हुनेगरी, सरकार पनि बदनाम नहुनेगरी र प्रेस काउन्सिलको भूमिका पनि अझ मर्यादित र जिम्मेवार हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्छ ।
नवलपरासीमा तीन मोटरसाईकल एकसाथ जुध्दा एकको मृत्यु
कृषि क्षेत्रमा भविष्य खोज्दै यशोदा राई
मंसिर २०, धरान । दुर्गम गाउँको विद्यालयमा निमावि सम्म पढेर शहरी क्षेत्रमा झरेकी यशोदा राई संघर्ष गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म स्नातकोत्तर गर्न पुगिन् । यसबीच उनले गैरसकारी संस्थामा जागिर खाँदै पढिन् । महिला हक, हितका लागि काम गरिन् अन्ततः अहिले उनले स्थापना गरेको कृषि सहकारी उत्कृष्ट सहकारी बनेक... जारी राख्नुहोस...
पूर्वाञ्चल विद्या सदन सेकेण्डरी बोर्डिङ्ग स्कुललाई पूर्वमा एक नम्बर बनाउँछौः सञ्चालक श्रेष्ठ
मंसिर १७, बिराटनगर । पूर्व को सबैभन्दा ठुलो तथा देशकै दोश्रो ठुलो सहरको रुपमा रहेको छ बिराटनगर । बिराटनगर एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँले देशको आधा भन्दा बढि आर्थिक अवस्थालाई पनि धानेको छ त्यसमा पनि बिराटनगरले औद्यौगिकताको पहिचान पनि बोकेको छ ।बिराटनगरको बसपार्कबाट करिब ५० किलोमिटर उत्तर तिर देशकै सुन... जारी राख्नुहोस...
मंसिर ९, विराटनगर । जाडो बढेसँगै चिसो मौसममा छालामा बिभिन्न प्रकारका रोगहरु सुरु हुँदै जान्छ । चिसो मौसममा छालामा देखा पर्ने भनेको मुख्य समस्या सुख्खापन रहेको बिराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा. सव्रिना यमु श्रेष्ठले बताइन् ।उनकाे अनुसार जाडो बढेसँगै वातावरणमा हुमेडिटी आग्रता घट्ने भ... जारी राख्नुहोस...
अस्ट्रेलियामा एइसी माइग्रेसन एण्ड एजुकेशन कन्सल्टेन्सी चलाउँदै आएका होम दवाडी नेपालमा अस्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सल्टिङबाट विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिइरहेका छन् । सन् २००८ मा विद्यार्थी भिसामा श्रीमती सहित अस्ट्रेलिया पुगेका उनले शुरुवाती दिनमा धेरै दुखः भोगे । बसाईको समस्या, भाषाको समस्या, पढाईको... जारी राख्नुहोस...
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको चटारो छ । यहि मंसिर १५ गतेबाट काठमाडौं, पोखरामा हुने प्रतियोगितालाई भब्य साथ सम्पन्न गर्न उनी दिनरात लागिपरेका छन् । प्रतियोगिता आउन ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले शंशय पै... जारी राख्नुहोस...
चिसो मौसमबाट बच्चालाई कसरी जगाउने ?
मसिंर ३ बिराटनगर । मौसम परिवर्तनको क्रमसंगैँ जाडो बढदै छ । यो मौसममा अधिकांश बच्चाहरुलाई निमोनिया, रुघाखोकी जस्ता समस्याहरुले सताउने गर्दछ । अन्य उमेर समुह भन्दा पनि अधिकांश बच्चामा उक्त रोगसगँ लड्ने क्षमता कमभएकाले अधिकांश यस्ता खाल्का समस्याबाट बच्चाहरु संक्रमित हुने गर्दछन् । चिसोबाट बच्चाहरुलाई... जारी राख्नुहोस...
‘जसलाई आफ्नै छोराहरुले मार्न खोजेका थिए’
कार्तिक ६, काठमाडाैं । विसं. २००८ सालमा १३ वर्षमा पुग्दै थिइन् इन्दिरा उपाध्याय । खान्दानी थिए परिवार । नोकरचाकर थिए । न घर भन्या थाहा थियो, न त माइती नै । उनको काम त खाने, पढ्ने अनि खेल्ने मात्रै ।त्यही साल हो । उमेर त्यही हो । समयले उनलाई एकाएक बेहुली पो बनाइदियो ! कसैकी बुहारी बनाइदियो । कसैकी प... जारी राख्नुहोस...
‘धरानको आजको चित्र भनेको नेकपाको नै देन हो’–चोत्लुङ
२०५७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय युवा फोक्वा हाङ सुव्वा (चोत्लुङ) एक दशक भन्दा लामो समयदेखि धरानको भूगोल, माटो र धराने जनतासँग प्रत्यक्ष परिचित छन् । उनी तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सहभागि भएका कुशल योद्धा हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य, धरान उपमहानगरको संयोजक... जारी राख्नुहोस...